Toekarena an-trano - Fanavaozana Maitso | Green Renewables (Pejy 2)
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra ny fomba fananganana turbine rivotra an-trano ho an'ny tranonay izahay. Raha te hianatra momba azy ianao dia midira eto.
Ny mpanadio rano dia manampy anao hisotro rano fisotro madio tsy misy bakteria sy zavamiaina bitika hafa manimba. Ianaro ato daholo izany.
Ny chronothermostat dia namolavola asa izay manatsara ny kalitaon'ny fanafanana ao an-tranontsika. Jereo eto daholo.
Ny hafanana manga dia lohahevitry ny paikady marketing marobe amin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Ianaro ato amin'ity lahatsoratra ity ny momba azy rehetra.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny emitters mafana
Ny emitters termal dia safidy fanafanana tena tsara ho an'ireo efitrano nandaniantsika fotoana bebe kokoa. Jereo eto ny tombony azony.
Tselatra akanjo elektrika
Ny tadin'ny fitafiana mandeha amin'ny herinaratra dia manolotra tombony maro noho ny nentin-drazana. Ianaro ireo fiasa rehetra sy ny fomba fiasan'izy ireo eto.
Mba hitsitsiana ny fanafanana, ny mpanangona hafanana no mety indrindra. Te hahafantatra azy ireo ve ianao sy ny fomba fiasan'izy ireo? Ny zava-drehetra mifandraika eto.
Ny loko mafana dia famoronana revolisionera eo amin'ny tontolon'ny insulation. Te hahafantatra ny fananana rehetra sy ny fomba fiasao ve ianao?
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny inona ny vilanin-tsolika voajanahary sy ny fomba fiasan'izy ireo ary ny karazany isan-karazany misy sy ny vidiny. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Mandoa vola ny orinasa alemana hampiasa herinaratra
Nahavita nanao fihenam-bidy tamin'ny faktioran'ny olompirenena i Alemana tamin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina.
Ny tombony azo antoka amin'ny angovo geothermal!
Loharanon-kery tsy mety ritra 365 andro isan-taona izy io, tsy toy ny rafitra hafa, tsy misy akony ny toetr'andro.
Miankina amin'ny karazana jiro ampiasaina, azonao atao ny mandany + na - angovo. Karazan-jiro, ny heriny, ny fanjifany, ny faharetany, ny vidiny ary ny fironana.
Manentana ny governemanta ny PSOE mba hitady vahaolana amin'ny fahantrana amin'ny angovo
Ny sekretera jeneralin'ny PSOE dia nanamafy ny filan'ny Pact State lehibe hahafahany miady amin'ny fahantrana amin'ny angovo.
Mitovy amin'ny aretina ve ny fahantrana angovo?
Isan-taona dia olona maherin'ny 7.000 no maty any amin'ny firenena izay trano roa amin'ny folo no tsy afaka mampirehitra ny hafanana. Ny fahantran'ny angovo dia mitaky fahafatesana.
Ny fiarahan'ny bateria an-trano sy ny takelaka amin'ny masoandro dia hiteraka herinaratra mora vidy ao anatin'ny 10 taona hoy i Tesla.
Fahaleovan-tena angovo, fitehirizana angovo isam-batan'olona
Ho an'ny olon-tsotra, ny famokarana farafaharatsiny ny sasany amin'ny heriny manokana miaraka amin'ny rafi-drivotra na ny tontolon'ny masoandro dia zavatra tsara.
Ny tsenan'ny fanaka baoritra
Vao tsy ela akory izay, fanaka baoritra sy zavatra no mariky ny fisondrotan'ireo mpanakanto sasany. Na izany aza, efa elaela no niseho ny fanaka baoritra, vonona ny hanolo ny fanaka vita amin'ny hazo nentim-paharazana.
Ny fiasan'ny rivotra fitahirizana divay
Ny fantsom-panafody divay divay dia fitaovana tena ilaina ho an'izay rehetra manana fitoeram-boaloboka ary manatsara ny kalitaon'ny divay.
Ny rano misitrika dia takiana amin'ny fampiasana ao an-trano, toy ny rano ampiasaina amin'ny vy etona, ho an'ny orinasa etona, na ny bateria.
Ny timer dia fitaovana manampy antsika hitsitsy angovo
Vokatra biolojika sy ny vidiny
Ny bisikileta elektrika dia fitaovana fitaterana ekolojika
Mampitombo ny famokarana biogas ny sisan'ny voatabia sy dipoavatra
NH dia manolo-tena amin'ny fanodinana any amin'ireo fotodrafitrasa misy azy
Ny fanaka baoritra dia safidy ekolojika ho an'ny tranontsika
Ny ranon'orana dia mety ilaina amin'ny fampiasana isan-karazany ao an-trano, azonao atao ny manangona azy ary mampita azy mba hampihenana ny fanjifana rano fisotro ao an-trano, manampy ny tontolo iainana.
Ny fandrahoan-tsakafo ao anaty microwave dia mitahiry eo anelanelan'ny 60 sy 70 isan-jaton'ny fanjifana angovo, araka ny IDAE. Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava ny fomba tokony handrahoana amin'ny microwave mba hahazoana vokatra tsara.
Automation an-trano, loharano hamoronana trano ekolojika
Ny automatisation an-trano dia teknolojia manapotika izay manome trano fampiononana, fiarovana ary fitehirizana angovo. Izy io dia ahitana ny mandeha ho azy ny serivisy sy ny singa ao an-trano hanamarinana ny fandaniana angovo, ny filaminana ary ny fiononana ao an-trano.
Ny haitao masoandro dia iray amin'ny angovo azo havaozina sy madio, iray amin'ny fampandrosoana mandroso indrindra amin'ny ...